निःशुल्क अनलाइन GED® बन्ने कक्षा | HiSet ™ र GED® तयारी कक्षा
तपाईंको GED® प्रमाण लागि अध्ययन अनलाइन र आफ्नो काम अवसर सुधार.
तपाईं सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईं आफ्नो GED लागि अध्ययन गर्न सक्छौं® परीक्षा वा HiSet ™ परीक्षा.
यो GED पूरा®/HiSet ™ तयारी कक्षा तपाईं आफ्नो उच्च विद्यालय equivalency उपाधि कमाउन तयार गर्न मद्दत गर्नेछ. यो उपाधि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय पूरा गर्ने कसैले जस्तै ज्ञान छ देखाउँछ. यो एक ठूलो उपलब्द्यि छ. मात्र तपाईं शिक्षा प्राप्त हुनेछ, तर तपाईं राम्रो काम विकल्प हुनेछ.
तपाईं के राज्य बस्न आधारमा, को उपाधि या त एक GED भनिन्छ गरिनेछ® प्रमाण वा HiSet ™ प्रमाण. चार कक्षामा पूरा – सामाजिक अध्ययन, भाषा कला, विज्ञान, र गणित – तपाईं आफ्नो परीक्षा लागि तयार हुनेछ.
तपाईं नजिकै एक परीक्षण केन्द्र पत्ता लगाउन.
यी GED® अभ्यास परीक्षण र तयारी कक्षाहरू अनलाइन. तपाईंले आफ्नो फोन वा कम्प्युटरमा यी कक्षाहरू लाग्न सक्छ.
यो कक्षाहरू आत्म-paced छन्, त्यसैले तपाईं कुनै पनि समयमा सिक्न सक्छौं.
हाम्रो कक्षाहरू तपाईं परीक्षण को लागि तयार हुनेछ, तर तपाईंले आफ्नो GED प्राप्त गर्न एउटा सरकारी परीक्षण केन्द्र जाने गर्नुपर्छ® उपाधि. कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईं बताउँछ भने तिनीहरूले तपाईं एक GED दिन सक्छ® उपाधि, यो सत्य होइन. तिनीहरूलाई पैसा वा व्यक्तिगत जानकारी दिन छैन.
हाम्रो GED चार कक्षाहरू छन्® तयारी कार्यक्रम, को परीक्षा मा प्रत्येक विषय लागि एक:
स्वागत सामाजिक अध्ययन क्लास गर्न!
यो नि: शुल्क सामाजिक अध्ययन वर्ग तपाईं सिक्न र GED लागि अध्ययन गर्न मद्दत गर्नेछ®, HiSET ™, वा TASC सामाजिक अध्ययन परीक्षण.
यो नि: शुल्क अनलाइन कक्षा आधिकारिक परीक्षण लिन तयार. कक्षा तपाईं GED लागि अध्ययन गर्न मद्दत गर्नेछ®, HiSET ™ र TASC सामाजिक अध्ययन परीक्षण.
तपाईंले यो वर्ग देखि एक उपाधि प्राप्त हुनेछ. तपाईं परीक्षण अनलाइन लिन सक्दैन. तपाईंको GED कमाउन®, तपाईं GED लिन छ® एउटा सरकारी GED मा व्यक्तिमा परीक्षण® परीक्षण स्थान. तपाईंले सबै विषयहरू पारित गरेपछि, तपाईं एक उच्च विद्यालय equivalency उपाधि प्राप्त हुनेछ. के राज्य वा देशको आधारमा तपाईं बस्ने, आफ्नो उपाधि GED भनिन्छ गरिनेछ® वा HiSET ™ वा TASC.
यी निःशुल्क अनलाइन कक्षाहरू को लक्ष्य आधिकारिक GED पास गर्न तयार छ® परीक्षण. आफ्नो उपाधि कमाउन तपाईं स्कूल र काममा थप अवसर दिन हुनेछ. तपाईं एक उच्च विद्यालय equivalency उपाधि छ भने, तपाईं विश्वविद्यालय जाने सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि राम्रो काम पाउन सक्नुहुन्छ.
सामाजिक अध्ययन GED®/HiSET ™ / TASC परीक्षण इतिहास को आफ्नो समझ मापन, अर्थशास्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिका र दुनिया को भूगोल. हाम्रो पाठ ती विषयहरू बारेमा सिकाउन हुनेछ. पाठ पनि परीक्षण प्रश्नहरूको जवाफ लागि सुझाव दिन.
यी पाठ प्रत्येक को अन्त मा, त्यहाँ एक क्विज छ. को क्विजहरू तपाईं आफ्नो GED लागि अभ्यास गर्न मद्दत गर्नेछ®, HiSET ™, वा TASC परीक्षण. तिनीहरूले प्रश्नहरूको एउटै प्रकार तपाईं वास्तविक परीक्षण मा आग्रह गरिने सोध्न.
सामाजिक अध्ययन वर्ग GED® स्वागत
राजनीतिक दलहरू र नीतिहरू
क्रांतियों अर्थव्यवस्था परिवर्तन
परीक्षण तयारी 1
निष्कर्ष र पोस्ट-क्विज 1
स्वागत GED गर्न® गणित मद्दत वर्ग!
यो नि: शुल्क GED® गणित वर्ग तपाईं GED लागि गणित सिक्न तयार हुनेछ® , HiSet ™ वा TASC परीक्षण.
आफ्नो परीक्षण लिनुभएको र महत्वपूर्ण सोचाइ सीप विकास. यी सबै GED तपाईंलाई मदत गर्नेछ®/HiSET ™ / TASC विषयहरू.
यो वर्ग आधारभूत गणित कौशल सिकाउँछ. तपाईं सिक्न र GED लागि अध्ययन गर्न यी कौशल प्रयोग गर्नेछ®, HiSET ™ र TASC गणित सामाग्री. आधारभूत गणित कौशल तपाईं बुझ्न मदत र परीक्षण छ कि गणित सम्झना हुनेछ.
प्रत्येक पाठ को अन्त मा, तपाईं पूरा गर्न को लागि एक प्रतियोगिता हो. को क्विजहरू तपाईं आफ्नो GED लागि अभ्यास गर्न मद्दत गर्नेछ®/HiSet ™ / TASC परीक्षण. तपाईं पाठ मा सामाग्री बुझे यदि क्विजहरू पनि देखाउन.
आधारभूत गणित 1
आधारभूत गणित 2
आधारभूत गणित 3
आधारभूत गणित 4
आधारभूत गणित 5
आधारभूत गणित 6
आधारभूत गणित 7
थप्दै, भिन्न घटाएर र रूपान्तरण
आधारभूत गणित 8
आधारभूत गणित 9
आधारभूत गणित 10
आधारभूत गणित 11
आधारभूत गणित 12
आधारभूत गणित 13
आधारभूत गणित 14
आधारभूत गणित 15
आधारभूत गणित 16
आधारभूत गणित 17
कार्य को लागि गणित कौशल प्रयोग
आधारभूत गणित 18
आधारभूत गणित 19
आधारभूत गणित 20
स्वागत GED गर्न®/HiSet ™ भाषा कला तयारी कक्षा!
यो नि: शुल्क GED® भाषा कला खण्ड वर्ग तपाईं GED पास गर्न मद्दत गर्नेछ® वा HiSET ™ भाषा कला खण्डहरू.
यो भाषा कला वर्ग तीन खण्डहरू छ: पढाइ, व्याकरण, र लेखन. सबै तीन वर्गहरु GED छन्®/ HiSET ™ परीक्षण.
प्रत्येक पाठ को अन्त मा, त्यहाँ एक क्विज छ. को क्विजहरू तपाईं आफ्नो GED लागि अभ्यास गर्न मद्दत गर्नेछ®/HiSET ™ परीक्षण. तपाईं पाठ मा सामाग्री बुझे भने तिनीहरूले पनि देखाउन.
तपाईं गलत जवाफ को एक धेरै भने कृपया चिन्ता छैन. तपाईं जस्तै धेरै पटक रूपमा परीक्षण लिन. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अभ्यास राख्न छ!
भाषा कला पढाइ 1
भाषा कला पढाइ 2
भाषा कला पढाइ 3
भाषा कला पढाइ 4
भाषा कला पढाइ 5
भाषा कला व्याकरण 1
भाषा कला व्याकरण 2
भाषा कला व्याकरण 3
भाषा कला व्याकरण 4
भाषा कला लेखन 1
भाषा कला लेखन 2
भाषा कला लेखन 3
भाषा कला लेखन 4
स्वागत GED गर्न®/HiSet ™ विज्ञान तयारी कक्षा!
यो नि: शुल्क GED® विज्ञान खण्ड वर्ग विज्ञान के तपाईं बुझ्न मदत गर्नेछ र कुन वैज्ञानिक अनुसन्धान छ. कक्षा भौतिकी तपाईं परिचय हुनेछ, जीव, र रसायन. तपाईंले पृथ्वीमा विज्ञान र बाहिरी ठाउँ सिक्न हुनेछ.
तपाईं सबै कुरा सम्झना गर्न आवश्यक छैन, तर यो केही वर्तमान वैज्ञानिक मुद्दाहरू परिचित हुन आफ्नो परीक्षण तपाईंलाई मदत गर्नेछ.
परीक्षण प्रश्न सबैभन्दा एक वैज्ञानिक पाठ पढ्न र प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं माग्छ. हामी तपाईंलाई तयार गर्न चाहनुहुन्छ. प्रत्येक पाठ को अन्त मा, त्यहाँ एक क्विज छ. यो प्रतियोगिता प्रश्न को GED समान छन्® परीक्षण प्रश्नहरू.
कृपया हामी यहाँ तपाईं प्रश्न छ भने तपाईंलाई मदत गर्न हो कि सम्झना.
विज्ञान धेरै लामो र असामान्य शब्द प्रयोग. पनि धेरै देशी अंग्रेजी वक्ता शब्दहरू थाहा छैन. प्रत्येक पाठ को अन्त मा, त्यहाँ एक शब्दावली समीक्षा छ. अप तपाईंलाई थाहा छैन कि शब्दहरू हेर्न. यो सिक्न र बुझ्न मदत गर्नेछ.
यहाँ एउटा छ अनलाइन शब्दकोश भनेर रूपमा बस सकेसम्म शब्द बताउँछन्.
कक्षहरू बुझ्न (सेलुलर जीव)